Dhakhaatiirta Raadiyaha Raadiyaha ee California - California Proton
La kulan Dhakhaatiirtayada
Xarunta la-talinta Kansarka ee Kansarka Protons waxay la wadaageysaa dhakhaatiir aad u fiican si ay u gaarsiiyaan heer aan daryeellaheyn heer daryeel iyo khibrad bukaannadeenna. Sida mid ka mid ah laba xarumood oo lagu daweeyo proton ee ku yaal Kaliforniya, iyo bixiye gobol, California Protons shuraako la ah dhakhaatiir ka socota nidaamyada caafimaadka ee gobolka oo dhan si ay u bixiyaan marin u helidda kuwa u baahan daaweynta daaweynta proton. Wada-hawlgalayaashayada waxaa ka mid ah:
Shirkadda Proton Dhakhaatiirta Proton
UC San Diego Caafimaadka
Isbitaalka Carruurta ee Rady
Xarunta la-talinta Kansarka ee Kansarka Protons oo ay iskaashanayaan Proton Dhakhaatiirta Xirfadleyda (PDPC) si ay u gaarsiiyaan heer aan ku habboonayn daryeelka caafimaad iyo khibrad bukaannadeenna. In ka badan 50 sano oo waayo-aragnimo isku dhafan ah oo ku dhex yaal garoonka proton, dhakhaatiirtayada PDPC waxay daaweeyeen inka badan 14,000 bukaan oo qaba daaweynta proton. Kooxdayadu waa mid caalami ah oo la aqoonsan yahay, oo ay raadsadaan bukaanno ka kala yimid adduunka, oo ku takhasustay daaweynta noocyo kala duwan oo kansarro caadi ah iyo kuwo naadir ah.
Adult Head & Neck, Sarcoma, Nidaamka neerfaha ee dhexe (CNS), Prostate, Naas
Dhillo, kaadi haysta, Renal, Lymphoma
UC San Diego Caafimaadka ayaa guud ahaan dalka lagu qiimeeyaa lix takhasus caafimaad iyo qalliin oo waaweyn US News & World Report, wuxuuna hoy u yahay San Diego oo ah Machadka Kansarka Qaranka ee loo qoondeeyay ee Loogu Talo Galay Xarunta Kansarka. Muddo tobannaan sano ah, UC San Diego Health iyo iskuuladeeda dawooyinka iyo farmasiiga ayaa horumarinaya dawada iyada oo loo marayo daahfurka daahfurka - oo ay ku jiraan gubashada qalliinka ee qalliinka, sawirka, daaweynta kansarka iyo daryeelka wadnaha. UC San Diego Health waa nidaamka kaliya ee daryeelka caafimaadka ku saleysan ee jaamacadda San Diego ku yaal inka badan 1,500 dhakhaatiir iyo saynisyahano oo lagu soo daabacay khubaro ku xeel dheer cilmigooda.
Dhilasha, kaadiheysta, naasaha, Sarcoma
Maskaxda, Nidaamka neerfaha ee dhexe (CNS), Naaska
Carruurta, Caloosha, Beerka, Prostate
Madaxa & Luqunta, Lymphoma, Gynecologic
Urologic, Madaxa & Qoorta, Neurologic
Sarcoma (Cadka & Cadka Jilicsan), Sambabka, Urologiga
Neurologic, Madaxa & Luqunta, Lymphoma
Neurologic, calool xanuun, beerka
Thoracic, naasaha, neerfaha (oo ay ku jiraan burooyinka salka qalfoof), Dhillo, Madaxa iyo Luqunta, Shucaaca ku celceliya
Isbitaalka 'Rady-Children's' - San Diego waa xarun daryeelka carruurta ah oo sariir-jiif ah oo leh 551 oo bixisa ilaha ugu weyn ee adeegyada caafimaad ee dhammaystiran ee San Diego, koonfurta Riverside iyo gobollada Imperial. Rady-Children waa cusbitaalka keliya ee ku yaal aagga San Diego oo u goon-gaar ah daryeelka caafimaadka carruurta waana xarunta kaliya ee loogu talagalay carruurta dhaawacyada carruurta. Rady-Children waxay siisaa adeegyo ku takhasusay daaweynta kansarka iyo adeegyo dhiig oo loogu talagalay carruurta ku nool gobolka oo dhan. Bishii Juun 2018, Warbixinta Mareykanka & Warbixinta Caalamka kaalinta Rady-Children's ka mid ah cusbitaalada carruurta ugu wanaagsan ee dalka dhammaan 10ka takhasus ee carruurta ee majaladda daraasad lagu sameeyay.